နတ်တွေတောင်ကြိုက်မယ့် ဒူးရင်းသာကူနာမည်ကြီးတဲ့ နတ်သုဒ္ဓါဆိုတာ....
နတ်တွေတောင်ကြိုက်မယ့် ဒူးရင်းသာကူနာမည်ကြီးတဲ့ နတ်သုဒ္ဓါဆိုတာ….
22 Jun 2018 . 1:42 PM
ခုတလော အစားချစ်သူတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသတင်းမွှေးနေတာကတော့ မွှေးအီဆိမ့်ပြီး စားဖူးသူတိုင်းကြိုက်တဲ့ နတ်သုဒ္ဓါတွေတဲ့နော်။ နတ်သုဒ္ဓါဆိုတော့ နတ်ပြည်မှာ နတ်တွေပဲ စားကြတဲ့ အစားအစာ အထူးအဆန်းကြီးလို့များ ထင်သွားပြီလား?
အမှန်ကတော့ နတ်တွေတောင် ကြွေကျသွားလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်နဲ့ အုန်းနို့သာကူပြင်တွေကို ပြောတာပါတဲ့နော်။ ညွှန်းချက်က နာမည်ကအစ လန်းနေတော့ ကိုယ်တွေ စိတ်မဝင်စားဘဲ နေနိုင်ရိုးလား။
နာမည်လေးက ဆန်းတဲ့အပြင် ထုပ်ပိုးမှုလေးကလည်း ဟိုးလူကြီးသူမတွေခေတ်တည်းက ဒီဇိုင်းဆန်းလေးနဲ့ ချစ်စရာ။ စားဖူးတဲ့သူတိုင်းကပါ ကြွေနေကြတာဆိုတော့ ဒါမျိုးဆို အခရာကလည်း ကိုယ့်အစားသမားတွေကို သတင်းပေးဖို့ ကြံပြီလေ။ ဘယ်လိုမှာရလဲ? ဘာတွေရလဲ? ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလို့လဲ? ဆိုတာတွေ သိရအောင် ချက်ချင်း “Ambrosia နတ်သုဒ္ဓါပွဲထိုင်နှစ်ထပ်စားအုန်းနို့သာကူပြင်” ဆိုတဲ့ Page လေးရဲ့ Message Box ကို အပြေးအလွှား မှာချလိုက်တာပေါ့။
နတ်သုဒ္ဓါမှာ အဓိက ရောင်းတာ ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ဒူးရင်းသာကူပြင်နဲ့ အုန်းနို့သာကူပြင်ပါ။ တစ်ဗန်း ၅၀၀၀ တန် ကို အဓိကထားရောင်းတယ်တဲ့။ တစ်ခွက်တစ်ထောင်တန်လေးတွေလည်း ရှိပေမယ့် ပစ္စည်းပျက်တတ်တယ်ပြောတယ်။ Order မှာမယ်ဆို ဖုန်း 09965017886 ကို ဆက်ပြီးလည်း မှာလို့ရတယ်။
မှာရင်တော့ မှာချိန်ကနေ ၃ရက်အတွင်း ပူပူလေး လာပို့ပေးပြီး Delivery ခ ကတော့ ၂၅၀၀ ကျတယ်။ နယ်မြို့တွေဆို စနေနေ့တိုင်း ပို့နေပြီပြောတယ်။ နတ်သုဒ္ဓါကတော့ နယ်ကပါ အပြိုင်အဆိုင်မှာစားကြရတာဆိုပဲ။ ဆိုင်ရောင်းရချက်ကတော့ လှည်းတန်းစင်တာမှာတောင် ဇူလိုင်လဆို ဖွင့်တော့မယ်တဲ့။
ကိုယ်တွေကတော့ တစ်ရုံးလုံးက မြည်းဖို့ တာဆူနေပြီဆိုတော့ကာ ဒူးရင်းသာကူပြင်တစ်ဗန်း၊ အုန်းနို့သာကူပြင်တစ်ဗန်းကို အင်္ဂါနေ့က မှာချလိုက်တယ်။ ကြာသပတေးနေ့ညနေစောင်းကျတော့ ရုံးပေါ်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပဲ နတ်သုဒ္ဓါဘူးလေးတွေ ရောက်ချလာပါလေရော။
ဘူးမြင်တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားနေလို့ ချက်ချင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အားပါးပါး…..အုန်းသီးနံ့၊ ဒူးရင်းသီးနံ့ဆိုတာ လှိုင်ပြီး မွှေးတက်လာတာ။ အုန်းနို့သာကူပြင်က အပေါ် အုန်းနို့သား ပိုခြောက်တယ်။ ဒူးရင်းသာကူပြင်ကတော့ အပေါ်သားလေးက ဝါဝင်းတင်းရင်း ရွှေအဆင်းနဲ့ ဗန်းလေးလှုပ်တိုင်း တုန်တုန်တုန်တုန်မုန့်သားလေးတွေ လှုပ်နေတာများ ချက်ချင်းဇွန်းနဲ့ ခပ်ပြီး စားချလိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပဲ။
ဆိုင်ကတော့ အေးအေးလေးလည်း ပိုစားကောင်းတယ်ပြောပေမယ့် ဒီလိုလုပ်ပြီးကာစ ပူပူနွေးနွေး အနံ့သင်းပြီးတက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ စားရတာပိုအရသာကောင်းမယ်ထင်တာပဲ။ အဲ့အချိန် သင်းပြီး လှိုင်တက်နေတဲ့ အနံ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်အားကြောင့် တရုံးလုံးက လူတွေအားလုံး နတ်သုဒ္ဓါဗန်းလေးတွေနားမှာ စုနေကြပြီ။
ကဲ..နောက်ဆုံးတော့ အရမ်းဆွဲဆောင်လွန်းနေတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်လေးကို တစ်ဇွန်း အရင်ခပ်လိုက်တယ်။ အပေါ်သားအိအိလေးနဲ့ အောက်ခံသာကူစိလေးတွေကဇွန်းထဲကပ်ပြီးပါလာတာ အညိုရောင်အပေါ်သားလေးတွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ အဲ့အညိုသားလေးတွေပါပါအောင် ခပ်ပြီး ပါးစပ်ထဲ တစ်ဇွန်းမြည်းလိုက်တဲ့အခါ…..
လုံးဝ ဆွံ့အသွားမိတယ်။ အီမွှေးအောင်စားကောင်းတဲ့ ဒူးရင်းသီးအဖတ်တွေရယ်၊ အုန်းနို့လေးရဲ့ ချိုဆိမ့်ဆိမ့်မလေးတလေးအရသာလေးရယ်၊ အောက်က အိစက်နေတဲ့သာကူစိလေးတွေရယ် သုံးမျိုးပေါင်းလိုက်တာ တကယ့် နတ်သုဒ္ဓါကို လျှာဖျားမှာ ထိတွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။ ကြွေတာ ကြွေတာဆိုတာ။ အပေါ်အညိုသားလေးတွေက ပိုရူးအောင်ကို ကောင်းတာ။ အဲ့အပေါ်သား ဒူးရင်းအနှစ်လွှာလေးက ချိုလေးလေးလေးနဲ့ အီမွှေးဆိမ့်နေတာမို့ အောက်ကသာကူနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ အီလည်လည်မဖြစ်သွားအောင် သာကူပြင်လေးကိုတော့ အချိုပေါ့ပေါ့လေးလုပ်ပေးထားတယ်။
ဒူးရင်းသီးမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ အုန်းနို့ကို ကြွေကျမှာ အမှန်ပဲ။ ဒူးရင်းအနံ့နဲ့ အရသာမပါတာကလွဲရင် အုန်းနို့အဆိမ့်ဓါတ်က ချို ဆိမ့် ပြီး တစ်လုတ်စားလိုက်တိုင်း ပါးစပ်ထဲကုန်ခါနီးလေ အရသာရှိလေပဲ။
ဒူးရင်းနဲ့ အုန်းနို့ဆို ဒူးရင်းကို ပိုကြိုက်မိတယ်။ ဈေးလည်း တူတဲ့အပြင် ပိုနူးညံ့အိနေရော။ ဒူးရင်းရာသီကုန်သွားရင်တော့ မရတော့မှာ ဝမ်းနည်းမိတဲ့ထိပဲ။
ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း တစ်ဗန်း ၅၀၀၀ က ထုပ်ပိုးမှုသေချာကောင်းတော့တန်တယ် ခံစားရတယ်။ အရသာလည်း ကိုယ့်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ထဲက ဒီလိုအရည်သွေးကောင်းကောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထွက်လာတာလေးလဲ ကျေနပ်ရတယ်။ ဓါးလေးနဲ့ ဇွန်းလေးပါပါသေး။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရင်လည်း ၄၊၅ ရက်လောက်အစားခံတယ်ဆိုပဲ။
အဲ့ ၂မျိုး ၂ဗန်းကို ရုံးကတစ်ဖွဲ့လုံး မြည်းကြတာ ၁၀ မိနစ်မကြာဘူး ပြောင်ပါလေရော။ လူကြီးသူမတွေဆို ပိုလို့တောင် ကြိုက်ကြမှာ သေချာတယ်။ နတ်တွေတောင်ကြိုက်ကြမယ့်အရသာဆိုတော့ စားဖူးပြီးရင်တော့ မြိန့်မြိန့်ကြီး ကျေနပ်ဇိမ်ခံလို့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ခုလောလောဆယ်တော့ Message Box ကနေမှာရင်မှာ မမှာရင် FMI City ဝန်းထဲမှာ ဝယ်ရမှာဆိုပေမယ့် နောက်လလောက်ဆို လှည်းတန်းစင်တာမှာ သွားဝယ်လို့ရပြီဆိုတော့ ခနခနဝယ်စားဖို့သာ ဟန်ပြင်ထားကြတော့ဗျို့။ ကဲ…နတ်တွေစားတဲ့ နတ်သုဒ္ဓါစားပြီး နတ်စည်းစိမ်ခံလိုက်ကြရအောင်လား အမျိုးတို့။
နတျတှတေောငျကွိုကျမယျ့ ဒူးရငျးသာကူနာမညျကွီးတဲ့ နတျသုဒ်ါဓဆိုတာ….
ခုတလော အစားခဈြသူတှကွေားမှာ နာမညျကွီးသတငျးမှေးနတောကတော့ မှေးအီဆိမျ့ပွီး စားဖူးသူတိုငျးကွိုကျတဲ့ နတျသုဒ်ါဓတှတေဲ့နျော။ နတျသုဒ်ဓါဆိုတော့ နတျပွညျမှာ နတျတှပေဲ စားကွတဲ့ အစားအစာ အထူးအဆနျးကွီးလို့မြား ထငျသှားပွီလား?
အမှနျကတော့ နတျတှတေောငျ ကွှကေသြှားလောကျအောငျကောငျးတဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျနဲ့ အုနျးနို့သာကူပွငျတှကေို ပွောတာပါတဲ့နျော။ ညှနျးခကျြက နာမညျကအစ လနျးနတေော့ ကိုယျတှေ စိတျမဝငျစားဘဲ နနေိုငျရိုးလား။
နာမညျလေးက ဆနျးတဲ့အပွငျ ထုပျပိုးမှုလေးကလညျး ဟိုးလူကွီးသူမတှခေတျေတညျးက ဒီဇိုငျးဆနျးလေးနဲ့ ခဈြစရာ။ စားဖူးတဲ့သူတိုငျးကပါ ကွှနေကွေတာဆိုတော့ ဒါမြိုးဆို အခရာကလညျး ကိုယျ့အစားသမားတှကေို သတငျးပေးဖို့ ကွံပွီလေ။ ဘယျလိုမှာရလဲ? ဘာတှရေလဲ? ဘယျလောကျတောငျကောငျးလို့လဲ? ဆိုတာတှေ သိရအောငျ ခကျြခငျြး “Ambrosia နတျသုဒ်ါဓပှဲထိုငျနှဈထပျစားအုနျးနို့သာကူပွငျ” ဆိုတဲ့ Page လေးရဲ့ Message Box ကို အပွေးအလှား မှာခလြိုကျတာပေါ့။
နတျသုဒ်ါဓမှာ အဓိက ရောငျးတာ ၂မြိုးရှိပါတယျ။ ဒူးရငျးသာကူပွငျနဲ့ အုနျးနို့သာကူပွငျပါ။ တဈဗနျး ၅၀၀၀ တနျ ကို အဓိကထားရောငျးတယျတဲ့။ တဈခှကျတဈထောငျတနျလေးတှလေညျး ရှိပမေယျ့ ပစ်စညျးပကျြတတျတယျပွောတယျ။ Order မှာမယျဆို ဖုနျး 09965017886 ကို ဆကျပွီးလညျး မှာလို့ရတယျ။
မှာရငျတော့ မှာခြိနျကနေ ၃ရကျအတှငျး ပူပူလေး လာပို့ပေးပွီး Delivery ခ ကတော့ ၂၅၀၀ ကတြယျ။ နယျမွို့တှဆေို စနနေတေို့ငျး ပို့နပွေီပွောတယျ။ နတျသုဒ်ါဓကတော့ နယျကပါ အပွိုငျအဆိုငျမှာစားကွရတာဆိုပဲ။ ဆိုငျရောငျးရခကျြကတော့ လှညျးတနျးစငျတာမှာတောငျ ဇူလိုငျလဆို ဖှငျ့တော့မယျတဲ့။
ကိုယျတှကေတော့ တဈရုံးလုံးက မွညျးဖို့ တာဆူနပွေီဆိုတော့ကာ ဒူးရငျးသာကူပွငျတဈဗနျး၊ အုနျးနို့သာကူပွငျတဈဗနျးကို အင်ျဂါနကေ့ မှာခလြိုကျတယျ။ ကွာသပတေးနညေ့နစေောငျးကတြော့ ရုံးပျေါကို ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျပဲ နတျသုဒ်ါဓဘူးလေးတှေ ရောကျခလြာပါလရေော။
ဘူးမွငျတာနဲ့ စိတျဝငျစားနလေို့ ခကျြခငျြးဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ အားပါးပါး…..အုနျးသီးနံ့၊ ဒူးရငျးသီးနံ့ဆိုတာ လှိုငျပွီး မှေးတကျလာတာ။ အုနျးနို့သာကူပွငျက အပျေါ အုနျးနို့သား ပိုခွောကျတယျ။ ဒူးရငျးသာကူပွငျကတော့ အပျေါသားလေးက ဝါဝငျးတငျးရငျး ရှအေဆငျးနဲ့ ဗနျးလေးလှုပျတိုငျး တုနျတုနျတုနျတုနျမုနျ့သားလေးတှေ လှုပျနတောမြား ခကျြခငျြးဇှနျးနဲ့ ခပျပွီး စားခလြိုကျခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှားပဲ။
ဆိုငျကတော့ အေးအေးလေးလညျး ပိုစားကောငျးတယျပွောပမေယျ့ ဒီလိုလုပျပွီးကာစ ပူပူနှေးနှေး အနံ့သငျးပွီးတကျနတေဲ့အခြိနျလေးမှာ စားရတာပိုအရသာကောငျးမယျထငျတာပဲ။ အဲ့အခြိနျ သငျးပွီး လှိုငျတကျနတေဲ့ အနံ့ရဲ့ ဆှဲဆောငျအားကွောငျ့ တရုံးလုံးက လူတှအေားလုံး နတျသုဒ်ါဓဗနျးလေးတှနေားမှာ စုနကွေပွီ။
ကဲ..နောကျဆုံးတော့ အရမျးဆှဲဆောငျလှနျးနတေဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျလေးကို တဈဇှနျး အရငျခပျလိုကျတယျ။ အပျေါသားအိအိလေးနဲ့ အောကျခံသာကူစိလေးတှကေဇှနျးထဲကပျပွီးပါလာတာ အညိုရောငျအပျေါသားလေးတှကေ ပိုကောငျးတယျဆိုတော့ အဲ့အညိုသားလေးတှပေါပါအောငျ ခပျပွီး ပါးစပျထဲ တဈဇှနျးမွညျးလိုကျတဲ့အခါ…..
လုံးဝ ဆှံ့အသှားမိတယျ။ အီမှေးအောငျစားကောငျးတဲ့ ဒူးရငျးသီးအဖတျတှရေယျ၊ အုနျးနို့လေးရဲ့ ခြိုဆိမျ့ဆိမျ့မလေးတလေးအရသာလေးရယျ၊ အောကျက အိစကျနတေဲ့သာကူစိလေးတှရေယျ သုံးမြိုးပေါငျးလိုကျတာ တကယျ့ နတျသုဒ်ါဓကို လြှာဖြားမှာ ထိတှလေို့ကျရသလိုပဲ။ ကွှတော ကွှတောဆိုတာ။ အပျေါအညိုသားလေးတှကေ ပိုရူးအောငျကို ကောငျးတာ။ အဲ့အပျေါသား ဒူးရငျးအနှဈလှာလေးက ခြိုလေးလေးလေးနဲ့ အီမှေးဆိမျ့နတောမို့ အောကျကသာကူနဲ့ ပေါငျးလိုကျတော့ အီလညျလညျမဖွဈသှားအောငျ သာကူပွငျလေးကိုတော့ အခြိုပေါ့ပေါ့လေးလုပျပေးထားတယျ။
ဒူးရငျးသီးမကွိုကျတဲ့သူတှကေတော့ အုနျးနို့ကို ကွှကေမြှာ အမှနျပဲ။ ဒူးရငျးအနံ့နဲ့ အရသာမပါတာကလှဲရငျ အုနျးနို့အဆိမျ့ဓါတျက ခြို ဆိမျ့ ပွီး တဈလုတျစားလိုကျတိုငျး ပါးစပျထဲကုနျခါနီးလေ အရသာရှိလပေဲ။
ဒူးရငျးနဲ့ အုနျးနို့ဆို ဒူးရငျးကို ပိုကွိုကျမိတယျ။ ဈေးလညျး တူတဲ့အပွငျ ပိုနူးညံ့အိနရေော။ ဒူးရငျးရာသီကုနျသှားရငျတော့ မရတော့မှာ ဝမျးနညျးမိတဲ့ထိပဲ။
ဈေးနှုနျးအနနေဲ့လညျး တဈဗနျး ၅၀၀၀ က ထုပျပိုးမှုသခြောကောငျးတော့တနျတယျ ခံစားရတယျ။ အရသာလညျး ကိုယျ့ပွညျတှငျးထုတျကုနျထဲက ဒီလိုအရညျသှေးကောငျးကောငျး၊ ထုပျပိုးမှုသပျသပျရပျရပျထှကျလာတာလေးလဲ ကနြေပျရတယျ။ ဓါးလေးနဲ့ ဇှနျးလေးပါပါသေး။ ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားရငျလညျး ၄၊၅ ရကျလောကျအစားခံတယျဆိုပဲ။
အဲ့ ၂မြိုး ၂ဗနျးကို ရုံးကတဈဖှဲ့လုံး မွညျးကွတာ ၁၀ မိနဈမကွာဘူး ပွောငျပါလရေော။ လူကွီးသူမတှဆေို ပိုလို့တောငျ ကွိုကျကွမှာ သခြောတယျ။ နတျတှတေောငျကွိုကျကွမယျ့အရသာဆိုတော့ စားဖူးပွီးရငျတော့ မွိနျ့မွိနျ့ကွီး ကနြေပျဇိမျခံလို့ ကောငျးမယျထငျပါတယျ။
ခုလောလောဆယျတော့ Message Box ကနမှောရငျမှာ မမှာရငျ FMI City ဝနျးထဲမှာ ဝယျရမှာဆိုပမေယျ့ နောကျလလောကျဆို လှညျးတနျးစငျတာမှာ သှားဝယျလို့ရပွီဆိုတော့ ခနခနဝယျစားဖို့သာ ဟနျပွငျထားကွတော့ဗြို့။ ကဲ…နတျတှစေားတဲ့ နတျသုဒ်ါဓစားပွီး နတျစညျးစိမျခံလိုကျကွရအောငျလား အမြိုးတို့။